Ndeipi iyo Best Software Testing Courses muIndia?
Kuedzwa ndeimwe yenhambo dzinokosha dzekufambisa software. Pachine mikana yokuti nzvimbo yekuedza haina kutungamirirwa zvakakodzera, kune mikana yakareba yekuti mabheji anofungidzirwa uye kusakwanira mune software hazvizowanikwe. Saizvozvowo, zvakakosha kuva nemafungiro emhando dzakanakisisa dzekuongorora test dzinoshandiswa kuti dzishandise.
The Best Software Testing Courses:
1. Akadzidziswa Software Test Professional Certification Course (CSTP):
2. Akavhenekerwa Test Manager Certification Course (CTM):
3. Zakavhiringidzika Software Software Manager Certification Courses (CSQM):
4. Akavhenekerwa Software Test Automation Specialist Certification Course (CSTAS):
Dzidza Software Testing
Heino mhepo yechikamu chechikamu chepamusoro padzidzo yepurojekiti yekuongorora iyo inogona kuedzwa nemanyanzvi.
Akavhenekera software test proficient certification course (CSTP)
Chiremba test manager certification course (CTM)
Akavhenekerwa software quality manager certification courses (CSQM)
Akavhenekera software test automation pro certification course (CSTAS)
Ichi chiyeuchidzo chepurogiramu yekuongorora software chinotarisirwa kuisa pfungwa pazvinhu zvinokosha uye zvakanakisisa zvekuongorora software. Nzira yekambani yakagadzirirwa kusvika pakuti inogona kunge isina yakawanda yekutsvaga inotsvakwa nevanotanga kushanda avo vanoita mabasa avo mune imwe nzvimbo yekuongorora software. Ichi chiyeuchidzo chinokurudzira nyanzvi kuti dzive nechokwadi chekugadzira zvakanakisisa test kesi dzinogona kushandiswa pakuwana simba kuunza kuedza software.
Izvo zvinotevera ndezvenzvimbo dzeiyo iyo iyo chikwata chekupa chipo chinopa kune vanobhabhatidzwa:
Kugadzirisa uye kukodzera kuenzanisa zviitiko zvekuedza zvezvinhu zvakaoma
Inotanga kuumba zvirongwa zvekuedza zvinogona kushandiswa zvakare mumakambani akasiyana-siyana
Kuronga pasi pasi semusangano
Kuumba zvakanakisisa nzira, nzira, uye nzira yekugadzirisa maitiro ekuedzwa
Kutarisa pakufungidzira zvakakosha kuti kugadziriswe kwemaedzo ekuedzwa
Kutarisana nemitemo yekusakwana kunotevera
Kusangana nemigwagwa yekuenzanisa nekugadzirisa kutongerwa kwezvinodiwa nevatengi
Kuisa pfungwa pazvinhu zvinokosha zvekuedza kushandiswa
Iyi dzidzo inopa simba rekutsvaga mu-software kuongororwa kuti iwane mapurojekiti anodikanwa ekugadzirira kuvabatsira kuti vaunganidze mabasa avo mumunda mumwe nomumwe.
Chikoro chekudzidzisa chikwata chikuru chakatorwa nehuwandu hwevanhu vane makore mashomanana ekubatanidza munzvimbo yekuedza asi havazi ivo nyanzvi. Ichi chirongwa chekuongorora mapurogiramu chepurogiramu inoonekwa sehafu yenzira iyo inopiwa neIIST kune nyanzvi dzekuongorora. Chimiro chechikoro chacho chakagadzirirwa kusvika pakuti icho chinotanga kumativi ose kusimbisa mano uye kudzidza kweyanyanzvi.
Izvo zvinotevera ndezvenharaunda dzezvenyaya iyi inopa:
Kutarisana nemhando dzakasiyana dzemuedzo
Kutungamira kwekuedza kwekuita
Kuongorora nekusimudzira ruzivo rwekuongorora uye nzira
Kufunga nezvekuchengetedzwa kwematambudziko
Kufananidza maitiro uye hurongwa hwekuongorora maitiro
Inosangana nezvinodikanwa zve software software certification.
Nokuda kwechikamu chikuru, nyanzvi dzine makore mashomanana ekubatanidzirwa mukuongorora kwepurogiramu uye dzinoda kuwedzera ruzivo rwavo uye kubudirira kusununguka zvinopfuurira nehuchi chiratidzo.
Zvimwe kunze kwekuisa pfungwa pakuvandudza maitiro uye ruzivo rwevadzidzisi nehupurogiramu yekuongorora kugadzirira, iyi chidziro chekudzidzira chinotarisana nekuvandudza unyanzvi hwekuchengeta up software quality. Chikwangwani chinowedzera leeway kune nyanzvi kuburikidza nekuvapa maitiro ekubata nehutano hwe software. Nyanzvi dzine chiziviso ichi chakanyanya kufarirwa nechikamu chikuru cheshamwari dzakakosha dzekutora mutsara wose wekuedza software uye kuchengeta unhu hwahwo.
Icho chinotevera chiri nharaunda yemashoko ekuti chikwata ichi chekudzidzisa chinopa:
Kuvandudza nzira dzekuchengetedza unhu hwe softwareIta mufananidzo wakajeka
Kushanda kwekusimbiswa kwemabasa ekugadziriswa kwehuwandu hwemagetsi
Kugadzira chekuita chekuona kwehutano hwehuwandu hwemapurogiramu
Kutaura kutsigira kwekuvandudza software nekubatanidzwa
Kutarisana ne-software configurations
Kuvandudza nzira dzekushandura software yepamusoro
Kuronga kuchengeta nekuongorora zve software
Chikoro chekudzidzisa chinonyanya kunotarisana nehuwandu hwehuwandu hwepurogiramu, pamwe nemiganhu iyi inoita musanganiswa wakanaka paunosanganiswa nechimwe chiyeuchidzo chekuongorora software.
Iyi ndeimwe yeiyo mapurogiramu ekuongorora mapurogiramu ayo anoreva zviremera mundima yekuongorora software. Iyo nyanzvi dziri kutsvaga kukura mazano avo uye kutora mutsva mitsva yekuvandudza software yekupimwa kusarudza sarudzo iyi yevhidhiyo. Chirongwa chepurojekiti yekuongorora mapurogiramu chinoreva kuti nyanzvi dzinenge makore anenge 10 ekubatanidzwa mune software yekuongorora. Iine mafungiro akawanda uye mazano ekusimbisa mapurogiramu ekuongorora mapurogiramu uye kuendesa zvinowanikwa zvinobudirira.
Izvo zvinotevera ndezvenyaya iyo iyi yechipatimendi inoendesa kune vanobhabhatidzwa:
Kupa zvinhu zvisiri nyore zvekuedza automation
Kugadzira chiyero chekuenzanisa kwekunyatsotariswa kwekuedzwa kwekuedza
Kuvandudza mazano uye nzira dzekuedza kushandura
Kugadzira nekuvandudza unyanzvi hwekuedza kushandiswa
Kugadzira matanho ekuedzwa kuti ave nechokwadi chehutano hwe software
Kushandisa nheyo dzekuedza dzekuchengetedza purogiramu inopesana nezvengozi dzingafungidzirwa
Ichi chiyeuchidzo ndechimwe chezvidzidzo zvepamusoro zvezveruzhinji mumunda wekuongorora kwepurogiramu uye inovimbisa zvakanyatsozivikanwa pamusoro pekuongorora software.
mu Just 2 Days
10 Kudzidzisa Kuurayiwa Kwekufa muSystem Testing inogona kukuita iwe mamionaire